မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များအတွက် အောင်မြင်ရေးဆိုင်ရာ သော့ချက်(၇)ချက် | Shwe Canaan TV
မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များအတွက် အောင်မြင်ရေးဆိုင်ရာ သော့ချက်(၇)ချက်
00Unknown Saturday, 21 May 2016
(7-Keys to Success for New Generation of Youth) အသက်(၄၀)ဆိုသည့် မှတ်တိုင်ကို ကျွန်တော် ကျော်ဖြစ်ပြီးသည့်အခါ အောင်မြင်သော အသက် တာ တည်ဆေ...
(7-Keys to Success for New Generation
အသက်(၄၀)ဆိုသည့် မှတ်တိုင်ကို ကျွန်တော်
ကျော်ဖြစ်ပြီးသည့်အခါ အောင်မြင်သော အသက်
တာ တည်ဆောက်ရေးအတွက် သိထားရမည့်
သော့ချက်တွေ၊ ပြင်ဆင်ရမည့် အရာတွေနဲ့၊ ဖြည့်
ဆည်းရမည့် လိုအပ်ချက်တွေကို အတော်အတန်
သင်ယူဆောင်ရွက်ပြီး ဖြစ်သည်။ သည်အရာ တွေ
ထဲက အချို့ ကို ယနေ့မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေအ
တွက်ပြန်လည်ေ၀ငှပေးလျှင် အကျိုးကျေးဇူးရှိ မည်
ဟုယုံကြည်မိသည်။ အမှန်ပြောရလျှင် ယနေ့လူ
ငယ်များသည် နောင်အနာဂတ် နိုင်ငံတော်ကို ဦးဆောင်ရမည့်
သူများ ဖြစ်သည်ကို မည်သူမျှ မငြင်းနိုင်ပါ။ သည်လူငယ်တွေ ဘက်စုံ ထူးချွန်ထက်မြက်ပြီး ခေါင်း ဆောင်ကောင်းများ ဖြစ်လာစေရန် ရည်ရွယ်လျှက် အချက်(၇)ချက်ကို ကျွန်တော် ေ၀မျှသွားပါမည်။
၁။ အခွင့်အရေးတွေကို မိမိရရ ဆုပ်ကိုင် အသုံးပြုပါ
(Grasp the opportunities)
“…အသက်တရားကို ရွေးယူလော့ဟု ဣသရေလအမျိုးအား ဟောပြော၏” (တရားဟော ၃၀း၂၀)။
ကျွန်တော်အသက် (၂၀)အရွယ်မှာ ရရှိခဲ့သည့် အခွင့်အရေးတွေထက် သည်ကနေ့ လူငယ်တွေ က ပိုမိုရရှိနေပါသည်။ အခွင့်အရေးတွေကို ထိထိရောက်ရောက် ဆုပ်ကိုင်အသုံးပြုနိုင်သူတွေသာ တစ်နေ့ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေ၊ အကြီးအကဲတွေ၊ အောင်မြင်သူတွေ ဖြစ်သွားကြပါသည်။
ယနေ့သင့်ရှေ့ မှာ ပညာရေး၊ စီးပွားရေး၊ အနာဂတ်အိမ်ထောင်ရေးနှင့် ၀ိညာဉ်ရေး (သို့) နှုတ်က ပတ်တော်ဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးတွေ ဘယ်လောက်ရှိနေပါသနည်း? သည်အရာတွေကို လိမ္မာပါးနပ်စွာ ေ၀ဖန်ပိုင်းခြားပြီး ဖမ်းဆုပ်ကိုင်ယူတတ်ဖို့ လိုပေသည်။ အချို့ သော အခွင့်အရေးများသည် တစ်သက် တွင် တစ်ကြိမ်တစ်ခါသာ ကြုံတွေ့ တတ်သည်ဖြစ်ရာ “ရွေးချယ်မမှားဖို့” ရန် သတိပြုရမည်။ သင်၏ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်မှုသည် သင့်အနာဂတ်ဘ၀တစ်ခုလုံးနှင့် ထာ၀ရကာလအထိတိုင် အကျိုး၊ အပြစ် သက်ရောက်စေနိုင်သည်ကို ဆင်ခြင်ပြီး မှန်ကန်သော ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်မှုဖြစ်ရန် အကြံပြုလိုပေသည်။
၂။ ပညာရပ်တစ်ခုခုကို ကျွမ်းကျင်စွာ တတ်မြောက်သူဖြစ်ရန် လေ့လာဆည်းမူးပါ
(Study hard to beaskilled person)
“ထိုသူတို့ (ဗေဇလေလနှင့် အဟောလျဘ)သည် ထုလုပ်တတ်သောသူ၏ အလုပ်၊ ဆန်းပြား သော လက်သမား၏အလုပ်၊ ပြာသောအထည်၊ မောင်းသောအထည်၊ နီသောအထည်၊ ပိတ်ချောကို ချယ်လှယ်တတ်သောသူ၏ အလုပ်၊ ရက်တတ်သောသူ၏ အလုပ်၊ အနည်းနည်းလုပ်တတ်သော သူ၏အလုပ်၊ ထူဆန်းစွာ ကြံစည်တတ်သော သူ၏အလုပ် အမျိုးမျိုးရှိသမျှတို့ကို လုပ်တတ်မည့် အကြောင်း ဉာဏ်ပညာနှင့် ပြည့်စုံစေတော်မူပြီ” (ထွက်မြောက်ရာ ၃၅း၃၅)။
ထာ၀ရဘုရား၏တဲတော် တည်ဆောက်ရာတွင် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များဖြစ်သည့် ‘ဗေဇလေလ’ နှင့် ‘အဟောလျဘ’တို့သည် အဓိကအခန်းကဏ္႑မှ ပါ၀င်ခဲကြပါသည်။ (ထွက်မြောက်ရာ ၃၅း၃၀-၃၅ထိ ဖတ်ရှုစေလိုပါသည်။) သည်အချက်သည် ယနေ့လူငယ်များအတွက် အောင်မြင်ရေးဆိုင်ရာ သော့ချက် တစ်ချက် ဖြစ်ပါသည်။
ဘုရားအလိုတော်နှင့် ကိုက်ညီသည့် မိမိဝါသနာပါရာ ပညာရပ်တစ်ခုခုကို သင်ယူဆည်းပူးဖို့ရန် အတွက် အကောင်းဆုံးအသက်အရွယ်သည် လူငယ်အရွယ်ပင် ဖြစ်သည်။ အချို့ သော ပညာရပ်များကို တတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက် ဝါသနာအပြင် အချိန်၊ ငွေကြေး၊ အဖိုးအခများစွာ ပေးဆပ်ဖို့ လိုအပ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တက္ကသိုလ်၀င်တန်းအောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက် မည်မျှ အပင်ပန်းခံ ကြိုးစားရသည်ကို အားလုံးအသိပင် ဖြစ်သည်။
“တစ်ခါအပင်ပန်းခံ တစ်သက်လုံးစံ” လို့ပဲ ကျွန်တော်ဆိုချင်သည်။ တစ်သက်လုံး ကောင်းစား မည့်အရာအတွက် တစ်ခဏတာ အပင်ပန်းခံဖို့ရန် မကြောက်ပါနှင့်။ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ပေးဆပ်လိုက်ပါ။ ပြီးမှ ယင်းနှင့်ညီမျှသည့် အောင်မြင်မှုကို ထိုက်ထိုက်တန်တန် ဆွတ်ခူး ရယူလိုက်ပါ။
၃။ ကမ္မာသုံး ဘာသာစကား တစ်ခုကို လေ့လာ သင်ယူပါ
(Learn and practice on international language)
“ထိုသို့ မိမိတို့ ပြောဆိုကြသောစကားကို ယောသပ်နားလည်သည်ဟု သူတို့ မထင်ကြ။ အကြောင်းမူကား၊ ယောသပ်သည် စကားပြန်နှင့် သူတို့ကို ပြောဆိုတတ်သောကြောင့်တည်း” (ကမ္မာဦး ၄၂း၂၃)။
သမ္မာကျမ်းစာကို လေ့လာသည့်အခါ ထူးခြားချက်တစ်ခုကို ကျွန်တော် တွေ့ ရှိမိပါသည်။ ယင်းမှာ ယေရှုခရစ်တော် အပါအ၀င် သမ္မာကျမ်းစာထဲ၌ ဖော်ပြပါရှိသော ခေါင်းဆောင်အားလုံး နီးပါးသည် မိခင်ဘာသာစကားအပြင် အခြားဘာသာ စကားတစ်ခု (သို့) နှစ်ခုထက်မကကို ကျွမ်းကျင် စွာ တတ်မြောက် ပြောဆိုခဲ့ကြကြောင်း တွေ့ ရှိရပါသည်။ (ဥပမာ-မောရှေ၊ ယောသပ်၊ နေဟမိ၊ ဧသတာ၊ ဒံယေလ၊ ခရစ်တော်၏တမန်တော်များ၊ ရှင်ပေါလု)။ မြန်မာပြည်ကို သာသနာပြုခဲ့သော ဆရာ ကြီးယုဒသန်သည်လည်း သူ၏ မိခင်ဘာသာစကားအပြင် ဂရိ၊ ဟေဗြဲနှင့် မြန်မာဘာသာစကားတို့ကို ကျွမ်းကျင်စွာ တတ်မြောက်ခဲ့ပါသည်။
ကမ်ဘာလုံးဆိုင်ရာ ရောယှက်ဆက်နွယ်မှုတွေ ပြုရသည့် Globalization ဆိုသည့် ယနေ့အချိန် အခါတွင် တိုင်းတစ်ပါးသား လူမျိုးခြားတို့၏ ဘာသာစကား (သို့) ကမ်ဘာသုံးဘာသာစကား တစ်ခုခုကို တတ်မြောက်မှသာ အဆင်ပြေမည့်ခေတ်ဟု ဆိုနိုင်သည်။ မိခင်ဘာသာစကားနှင့် မိမိနိုင်ငံ၏ အများသုံး ဘာသာစကားကို အလွယ်တကူ တတ်မြောက်နိုင်သော်လည်း နိုင်ငံရပ်ခြား ဘာသာစကား တစ်ခုခုကို တတ်မြောက်ဖို့ရန်မူကား မလွယ်ကူလှပေ။ ဘာသာစကား တစ်ခုခုကို ကောင်းစွာ သင်ယူတတ် မြောက်ဖို့ရန်အတွက် (၃)နှစ်မှ (၁၀)နှစ်အထိ အချိန်ပေးဖို့ လိုအပ်ပေရာ လူငယ်များ အနေဖြင့် ပြုလုပ် နိုင်သည့် အရာတစ်ခု ဖြစ်ပေသည်။
၄။ ဘုရားနှင့် အကျွမ်း၀င်သော အသက်တာဖြစ်ရန် လေ့ကျင့်မျိုးထောင်ပါ
(Buildastrong personal relationship with God)
“ထာ၀ရဘုရားသည် အိမ်ကို ဆောက်တော်မမူလျှင် ဆောက်သောသူတို့သည် အချည်းနှီး လုပ်ဆောင်ကြ၏။ ထာ၀ရဘုရားသည် မြို့ ကို ောင့်တော်မမူလျှင် ကင်းစောင့်တို့သည် အချည်းနှီး စောင့်ကြ၏” (ဆာလံ ၁၂၇း ၁)
ဘုရားမပါဘဲ လုပ်ဆောင်သမျှ အရာခပ်သိမ်းသည် အချည်းနှီးသက်သက်ဖြစ်ကြောင်း သတိမူ လျှက် ဘုရားသခင်ကို မိမိအသက်တာကဏ္႑အသီးသီး၏ အရှင်သခင်အဖြစ် အုပ်စိုးခွင့်ပေးပါ။ ဘုရား နှင့် တစ်ဦးတည်းအချိန်ယူခြင်း (Quiet Time) အလေ့အကျင့်ကို ပြုစုပျိုးထောင်ပါ။ မိမိအသက်တာကို တည်ဆောက်ခွန်အားပေးသည့် ၀ိညာဉ်ရေးရာ စာအုပ်စာပေကောင်းများကို ဖတ်ရှုလေ့လာပါ။
မည်သည့်အရာကိုမဆို မပြုလုပ်မီ ဘုရားအလိုတော်ကို တိကျရှင်းလင်းစွာသိရန် ရှာဖွေ ပါ။ တစ်စုံတစ်ခုလုပ်မည်ဆိုလျှင် ဘုရားထံ ဆက်ကပ်အပ်နှံပြီးမှ လုပ်ဆောင်ပါ။ “လူပျိုသည် မိမိသွား သောလမ်းကို အဘယ်သို့ သန့်ရှင်းစေနိုင်ပါမည်နည်းဟူမူကား နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်း သတိပြုရ မည်” ဆိုသည့် ဥပဒေသကို လိုက်နာပါ (ဆာလံ ၁၁၉း ၉)။ သန့်ရှင်းသော ၀ိညာဉ်တော်ဘုရား ၏ ဦးဆောင်မှု၊ ပဲ့ပြင်မှုကို ခံယူပြီး ဒုစရိုက်ပြုရာလမ်းမှ ေ၀းစွာ ရှောင်ကြဉ်ပါ။
၅။ သင်၏တိုင်းနိုင်ငံကို ပြောင်းလဲစေမည့် ပန်းတိုင်များကို ချမှတ်ပါ
(Set the goals order to change your nation)
“သိုးစုငယ်၊ သင်တို့သည် မကြောက်ကြနှင့်။ သင်တို့အဘသည် သင်တို့အား နိုင်ငံကို ပေးခြင်း ငှာ အလိုရှိတော်မှု၏” (လုကာ ၁၂း၃၂)။
လူငယ်တစ်ဦးအနေဖြင့် မိမိ၏ အနာဂတ်ပန်းတိုင်များကို ချမှတ်ရာတွင် မိမိအသက်တာနှင့် မိမိမိသားစုအတွက် လောက်သာ အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည့် ပန်းတိုင်များကို မချမှတ်ပါနှင့်။ အမြင်ကျယ် ကျယ်၊ နှလုံးသားကျယ်ကျယ်ထားပြီး မိမိတိုင်းနိုင်ငံကို အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည့် ရူပါရုံပန်းတိုင်များကို လည်း ချမှတ်ပါ။
ယနေ့ မိမိနိုင်ငံ၏ မည်သည့်ကဏ္႑များ၌ ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ရန် လိုအပ်သနည်း? မည်သည့် နည်းလမ်းများဖြင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်သနည်း? မိမိအနေဖြင့် မည်ကဲ့သို့ ပါ၀င်လုပ်ဆောင်နိုင်မည် နည်း? သည်မေးခွန်းတွေအတွက် အဖြေကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ပါ။ သင့်ကို မြန်မာပြည်၌ ထားရှိခြင်းသည် မြန်မာပြည်ကြီး ဘုရားသခင်ကောင်းကြီး ခံစားစေဖို့ရန်ဖြစ်ကြောင်း သိမှတ်လျှက် နိုင်ငံတော်အတွက် အကျိုးပြုနိုင်သည့် ပန်းတိုင်များကို ချမှတ်လိုက်ပါ။
၆။ လူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ပါ
(Do humanization works)
“ရှမာရိလူတစ်ယောက်သည် ခရီးသွားရာတွင် ထိုလူနာရှိရာသို့ရောက်၍ မြင်သောအခါ ဂရုဏာ စိတ်ရှိသည်နှင့် ချဉ်းကပ် သူ၏အနာများကို ဆီနှင့် စပျစ်ရည်ထည့်လျှက် အ၀တ်နှင့်စည်းပြီးလျှင် မိမိတိရစာၦန်ပေါ်မှာတင် ဇရပ်တစ်ခုသို့ ဆောင်သွား ပြုစုလေ၏” (လုကာ ၁၀း ၃၃-၃၄)။
“ယုံကြည်သူများသည် ဤလောက၌ ခဏတာဧည့်သည်များအဖြစ် နေထိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း” သမ္မာကျမ်းစာ ဆိုပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ ထာ၀ရနေရမည့် နေရာသည် “ကောင်းကင်သစ်နှင့် မြေကြီး သစ်” ဖြစ်သည်။ သည်အချက်ကို စွဲကိုင်ပြီး ယခုလက်ရှိ ကမ္ဘာမြေကြီးကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရမည့် တာ၀န်ကို လွှဲရှောင်ခြင်း မပြုသင့်ပါ။
ဤကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်တွင် ခရစ်တော် ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းအချိန်ထိ ဆက်လက်နေထိုင် မည့် လူသားများအတွက် အကျိုးပြုသည့် လုပ်ငန်းများကို တတ်စွမ်းသရွေ့ လုပ်ဆောင်ဖို့ လိုပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ နေထိုင်သည့် ပတ်၀န်းကျင်နှင့် ကမ္ဘာမြေကြီး စိမ်းလန်းစိုပြေစေရန်၊ သစ်ပင်ပန်းပင်များ စိုက်ပျိုးခြင်း၊ မြို့ တော်သန့်ရှင်းရေးအတွက် အမှိုက်များ ရှင်းလင်းပေးခြင်း၊ မိဘမဲ့ကလေးများအား ကူညီစောင့်ရှောက်ခြင်း၊ ပညာဒါန စာသင်ပေးခြင်း၊ သွေးလှုဒါန်းခြင်း၊ သဘာ၀ဘေးဒါဏ်ခံရသူများအား ကူညီမစခြင်း စသည့် လုပ်ငန်းများကို လူငယ်တစ်ဦးအနေဖြင့် အင်တိုက်အားတိုက် ပါ၀င်လုပ်ဆောင် နိုင်ပါသည်။
၇။ ဧဝံဂေလိနှင့် သာသနာပြုခြင်းလုပ်ငန်း၌ ပါ၀င်ဆောင်ရွက်ပါ
(Participate in Missions and Evangelism Works)
“သင်တို့သွား လူမျိုးတကာတို့သည် ငါ့တပည့်ဖြစ်စေလျှက် ခမည်းတော်၊ သားတော်၊ သန့်ရှင်း သော၀ိညာဉ်တော်၏နာမ၌ ဗတိ္တဇံပေးကြလော့” (မဿဲ ၂၈း၁၉)။
ခရစ်တော် စေခိုင်းခဲ့သည့် အကြီးမြတ်ဆုံးအမှုမှာ “သင်တို့ သွား၍ လူမျိုးတကာတို့ကို ငါ့တပည့် ဖြစ်စေပါ” ဆိုသည့် မိန့်မှာချက်ပင် ဖြစ်သည်။ ဧဝံဂေလိကယ်တင်ခြင်း သတင်းကောင်းကို လူတိုင်း ကြားသိစေရန် ပါ၀င်ဆောင်ရွက်ခြင်းသည် ခရစ်တော်၏ တပည့်တော်တိုင်း ထမ်းဆောင်ရမည့် တာ၀န်ဖြစ်သည်။
သင့်အသင်းတော်၏ ဧဝံဂေလိအစီအစဉ်တွေင် တက်ကြွစွာ ပါ၀င်ပါ။ သာသနာ ခရီးကို (Short term mission trip) ထွက်သည့် အဖွဲ့ တွင် ပါ၀င်ဆက်ကပ်ပါ။ သင့်၀င်ငွေ၏ ဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ကို အသင်း တော်၌ ထည့်၀င်ပြီး စေတနာအလှုငွေအချို့ ကို သာသနာပ ရံပုံငွေအဖြစ် ထည့်၀င်လှုဒါန်းပါ။ လူတွေ ထာ၀ရအပါယ်ငရဲမှ လွတ်မြောက်စေမည့် ဤအမှုတော် လုပ်ငန်းထဲ၌ သင်တတ်စွမ်းသည့်ဘက်မှ ပါ၀င်ဆောင်ရွက်ရသည်ကို ဂုဏ်ယူ၀င့်ကြွားလိုက်ပါ။
ကျွန်တော် ဖော်ပြခဲ့သည့် အချက်(၇)ချက်ကို နောက်တစ်ခေါက်လောက် ဖြည်းဖြည်းချင်းဖတ် ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို ယခုပဲ ချမှတ်လိုက်ပါ။
Shwe Canaan TV: မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များအတွက် အောင်မြင်ရေးဆိုင်ရာ သော့ချက်(၇)ချက်